Thwebula Anki 2.0.38 – Vessoft
English, Afrikaans, Українська, Français...
Download waqala, сheck isiphequluli sakho thwebula window. Uma kukhona izinkinga ezithile, chofoza inkinobho isikhathi esisodwa xaxa, sisebenzisa izindlela ezahlukene umxokozelo.
Operation uhlelo: Windows
Anki – isofthiwe ngekhanda umbhalo, image nolwazi audio. Isofthiwe isebenzisa indlela ohlakaniphile yokufundisa okuyinto isekelwe algorithm of ezinikezwa interval. Inhloso ngqangi yalo Anki usizo ekufundeni of ezinye izilimi futhi izici ezengeziwe ukuze ngekhanda zezibalo, amakhemikhali amafomula, izibalo, njll Futhi Anki ikuvumela ukuba ukuxhuma anezele okungase uvumelanise amakhadi emkhatsini kumadivayisi amaningi bese usebenzisa isofthiwe in the internet.
Ukufunda izilimi eziningi ezihlukahlukene
Ukuqeqeshwa inkumbulo ezibukwayo futhi sokuzwa
Yakha amakhadi akho siqu
Amazwana on Anki:
Anki Ahlobene software:
Education Isichazamazwi electronic ngokusekelwa ngezilimi eziningi ezahlukene. Isofthiwe uhumusha amagama olulodwa noma imishwana iqukethe database enkulu amazwi kusukela izichazamazwi ehlukahlukene.
English, Français, Español, Deutsch... GeoGebra 5.0.317
Education Isofthiwe ukusebenza kanye ahlukahlukene izibalo. Amathuluzi abaningi futhi izingxenye ukudala amagrafu ayatholakala umsebenzisi.
English, Українська, Français, Español... Scratch 453
Education Isofthiwe ukufundisa izingane izimiso eziyisisekelo lwezinhlelo. Isofthiwe isebenzisa interface lula for development elula amaphrojekthi ahlukahlukene.
English, Українська, Français, Español... Dia 0.97.2
Education Isofthiwe ukusebenza kanye Amacebo emazingeni ehlukene nobunzima. Futhi kusekela scaling futhi umsebenzi enezingxenye.
English, Français, Español, Deutsch... WordWeb 7.1
Education Ithuluzi elinamandla sokufuna amazwi ezidingekayo nemishwana. Isofthiwe ubonisa izincazelo kanye indlela efanele yokubiza amagama lamazwi atholakala futhi ukukhethela bomcondvofana nobe bomcondvophika kubo.
Education Imidlalo Isofthiwe ukwakha kanye ukuxazulula cryptographs. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi amaningi ukuze adale izinhlobo ezahlukene cryptographs.
Education Ithuluzi esikahle yakhelwe ukuba bafunde ukudlala upiyano. Isofthiwe isebenzisa inqubo yokufunda ephumelelayo ukufeza imiphumela esheshayo.
Education Amathuluzi for kathisha kohlaziyo noma kwamanani kanye nokwakha amagrafu. Isofthiwe ikuvumela ukuba sisebenze izinhlobo ezahlukene izibalo.
English, Українська, Français, Español... CmapTools 6.01.01
Education Development Ithuluzi ukudala umdwebo kwesakhiwo kanye namabalazwe mqondo. Isofthiwe ngempumelelo afanele imfundo, ulwazi iqoqo kanye umcondvo.
English, Français, Español, Deutsch... YGS Virtual Piano 2010.05.07
Education Isofthiwe sokulingisa umdlalo on the virtual midi-keyboard. Isofthiwe kwenza ukucacisa Ukubukeka of the music futhi ngezifiso insimbi yomculo nezidingo umsebenzisi.
Bitdefender 2014 17.28.0.1191 Free; 2014 17.28.0.1191, 2014 17.27.0.1146...
Antiviruses ithuluzi Functional ukuthola nokususa amagciwane. Isofthiwe ikuvumela ukuhambisa amafayela onegciwane ngokuhlukaniswa futhi ulungiselele schedule scan.
English, Français, Español, Deutsch... Zune 4.8.2345
Abadlali Media Hambayo Isofthiwe ukuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha kanye Windows Phone idivayisi. Isofthiwe kwenza ukuba ubuyekeze uhlelo yokusebenzisa yedivaysi kanye ukulawula uhlu lokudlala wezincwadi abezindaba.
English, Français, Español, Deutsch... .NET Framework 4.6.81 futhi 4
Izandiso Isethi izingxenye ezidingekayo ukuze ukusebenza le software futhi web isicelo esekelwe bokwakha .NET. Isofthiwe isekela izilimi ezihlukahlukene izinhlelo.
Akwazi ukugcina An lula ukusebenzisa isofthiwe ukuguqula okuqukethwe DVD and Blu-ray akwazi ukugcina singene format MVK. Isofthiwe ugcina layo kanye nezigaba ulwazi we disk.
English, Français, Español, Deutsch... CPU-Z 1.77
Testing Isofthiwe inquma idatha yobuchwepheshe izakhi abamelwe computer. Umbuso indawo isekela umsebenzi nezinhlobo eziningi esiyinhlanganisela izingxenye.
Bona software xaxa
Mozilla Firefox 50.1 futhi 51.0b9 rc 1
Popcorn Time 5.6
Java 8u111, 8u122 beta futhi 9u145 alfa...
CodeLobster PHP Edition 5.11.4